Home Wararka Beesha Caalamka oo si taxadar leh u soo dhaweysay doorashada Kismanyo ka...
Beesha Caalamka oo si taxadar leh u soo dhaweysay doorashada Kismanyo ka dhacday
Beesha Caalamka oo aan wali kalsooni buuxda ku qabin sida ay u dhacday doorashada Kismaanyo ayaa si taxadar leh u soo dhaweysay talaabada ay qaaday Jubbaland. Warsaxaafadeed wadajir ah oo kasoo baxay Saaxiibada Soomaaliya (Beesha Caalamka) ayaa looga hadlay Doorashada Soomaaliya, qoondada Haweenka iyo baaq ku socda Madaxdii ku heshiisay qabsoomidda Doorashooyinka Dalka.
Ugu horeyn warsaxaafadeedka ayaa lagu soo dhaweeyay horumarka laga gaaray hirgelinta heshiiskii 27-kii May 2021 ee dalka u horseeday dhabbaha loo marayo qabsoomidda Doorashooyinka Soomaaliya.
“Saaxiibada Caalamka waxa ay soo dhaweynayaan horumarka laga sameeyay hirgelinta Heshiiskii 27-kii May oo ay wada saxiixeen Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo Madaxweynayaasha Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka waxayna ugu baaqayaan Dowlad-Goboleedyada in ay si aan dib u dhac lahayn u abaabulaan doorashada Aqalka Sare, oo ahayd inay billaabato 25-ka Luulyo” ayaa lagu yiri Warsaxaafadeedka.
Dedaallada ay bogaadisay Beesha Caalamka waxaa kamid ah: Habraaca Doorashooyinka, Guddiga uu Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu u diray Arrinta Gedo, isu keenidda Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Dalka & Guddoomiyaha Aqalka & Qoondada Dumarka ee 30%.
“Waxaan ku baaqaynaa in shaqada harsan ee lagu soo gunaanadayo geeddi-socodka doorashada ay si degdeg ah waliba si waafaqsan heshiisyadii la gaaray ee ku saleysnaa isla ogolka arrimaha Doorashooyinka” ayaa lasii raaciyay Warsaxaafadeedka.